“ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း | Grab MM
Grab အကြောင်းသုံးစွဲသူယာဉ်မောင်း Enterprise
“ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကို မိတ်ဆက်ခြင်း
ယခုဆိုရင် သင်၏ Driver app က သင်နှင့် သင်၏ချစ်ခင်သူများကို စိတ်ချလုံခြုံမှု ပေးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကိုအသုံးပြုရုံဖြင့် သင်ရောက်ရှိနေတဲ့ တည်နေရာကို လင့်၊ SMS အသုံးပြုပြီး အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များဆီကို ချက်ချင်း မျှဝေပေးလို့ ရနိုင်ရုံမျှမက လိုအပ်ပါက ရဲစခန်းကိုပါ အကူအညီတောင်းလို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို သင့်ရဲ့ Driver app ထဲကနေ သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်! အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်အောင် အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်များကို ထည့်သွင်းပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုရတယ်ဆိုတာကို အခုပဲလေ့လာလိုက်ရအောင်။
အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်များကို ထည့်သွင်းပုံ အဆင့်ဆင့်
“More” ၏ အပေါ်ဆုံးမှ Driver Profile ကိုဝင်ရောက်ပါ။ Driver Profile ထဲမှာ “Emergency Contact” ကိုနှိပ်ပါ။
Emergency Contact ကို ၃ခုထိ ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ထည့်သွင်းဖို့အတွက် Add New Emergency Contact ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အဆက်အသွယ် List ထဲကမဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းလိုတယ်ဆိုရင် Add Manually နှိပ်ပြီး၊ အထဲမှာ ဖုန်းနံပါတ်၊ နာမည်တွေရိုက်ထည့်ပြီး Save လိုက်ရင် Emergency Contact တစ်ခု ဝင်ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်၏တည်နေရာ မျှဝေခြင်း ရပ်တန့်ဖို့အတွက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ “Emergency Contact” ကိုရွေးချယ်ပြီး “Remove Contact” ဆိုသည့် ခလုတ်နီကိုနှိပ်လိုက်ပါက အဆိုပါ Contact ကို ဖျက်သိမ်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ အဆက်အသွယ် လုပ်ရမည့်သူကို သင်၏တည်နေရာ မျှဝေပုံ အဆင့်ဆင့်
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ တကယ့်အရေးပေါ်အခြေအနေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလည်း ထည့်သွင်းထားတဲ့ Emergency Contact ထံ သင့်ရှိတဲ့ တည်နေရာကို မျှဝေပေးပုံကို အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိနေပြီး ခရီးစဉ်လက်ခံဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ “ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
အရေးပေါ် အခြေအနေကြုံတဲ့အခါ “ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုဝေမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး အောက်မှာ၊ “SMS Emergency Contact” ကို ရွေးချယ်လိုက်ရင် သင့်တည်နေရာကို SMS နဲ့ Emergency Contact များထံ ပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွင် ဝိုင်းပြထားပါတယ်။
မိတ်ဆွေရောက်ရှိနေတဲ့ တည်နေရာကို SMS, Viber, Messenger, WhatsApp, Line, We Chat စတဲ့ မိမိစိတ်ကြိုက် Chatting, Messaging App များမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်မျှဝေပေးနိုင်ဖို့ “Send Link” ကိုနှိပ်ပါ။ မိမိစိတ်ကြိုက် App ကိုရွေးချယ်ပြီး ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
သင့်အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ “တည်နေရာမျှဝေခြင်း” ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင် သင်ရှိနေတဲ့ တည်နေရာရဲ့ Link ကို Emergency Contact တွေထံ SMS ပေးပို့ပေးသွားမှာပါ။
သင်၏တည်နေရာ မျှဝေခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် “Stop Sharing Location” ကိုနှိပ်ပါ။
ရဲစခန်းကို အကြောင်းကြားပုံ အဆင့်ဆင့်
မိတ်ဆွေရဲ့ Contact Person အနေနဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မရှိရင်၊ အဝေးရောက်နေရင် “Call Police” ခလုတ်ကို ရွေးချယ်ပြီး အရေးပေါ် Hotline ကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
“ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုမျှဝေခြင်း” ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
“ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုမျှဝေခြင်း” အောက်မှာ၊ “Call Police” ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ရဲစခန်းရဲ့ အရေးပေါ် Hotline ကို တိုက်ရိုက် ဖုန်းခေါ်ဆိုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေး – “ကျွန်ုပ်၏ တည်နေရာကိုမျှဝေခြင်း” ခလုတ် ဆိုတာ ဘာပါလဲ?
အဖြေ – ဤခလုတ်အသစ်သည် သင့်အနေနဲ့ အန္တာရယ်ရှိသည်ဟု ထင်ရသည့် အခြေအနေများမှာ လျှင်မြန်စွာဖြင့် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားပေးခြင်း၊ သင်တည်ရှိနေသော နေရာကို သင်ခင်မင်ရသော သူများသို့ မျှဝေခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မည်။ သင်ဘေးကင်းလုံခြုံဖို့သည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
အမေး – ဤခလုတ်ကို ခရီးစဉ်အတောအတွင်း နှိပ်လိုက်ပါက ဘာဖြစ်ပါမလဲ?
အဖြေ – သင်သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ရှိနေပြီး ခရီးစဉ်လက်ခံရန် အဆင်သင့် ရှိနေတဲ့အခါမှာ အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးမည့် အစီအစဉ်ကို အသုံးပြုခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ် –
သင်၏တည်နေရာကို တိုက်ရိုက်ပြပေးသည့် လင့်ဖြင့် မျှဝေပေးခြင်း
သင်၏တည်နေရာကို ကြိုတင်ရွေးချယ် သတ်မှတ်ထားသော ရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များဆီသို့ မျှဝေပေးခြင်း
ရဲစခန်းသို့ ကြောင်းကြား ခေါ်ဆိုပေးခြင်း/ Grab လုံခြုံရေးသို့ SMS ဖြင့်အကြောင်းကြားခြင်း
အမေး – SMS အကြောင်းကြားစာကို ကျွနု်ပ်၏ဖုန်းနံပါတ်မှတဆင့် ပို့မှာပါလား?
အဖြေ – မဟုတ်ပါ၊ သင်၏ ဖုန်းနံပါတ်ကို အသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ SMS များအားလုံးကို Grab မှ သင့်ကိုယ်စား ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးကိုလဲ Grab မှကျခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမေး – Grab မှပေးပို့သော SMS အကြောင်းကြားစာများသည် မည်သည့် ဘာသာစကားနှင့် ဖြစ်မှာပါလဲ?
အဖြေ – SMS အကြောင်းကြားစာကို သင်၏အကောင့်အား စာရင်းသွင်းထားသည့် နိုင်ငံ၌ အသုံးပြုသော ဘာသာစကားဖြင့် ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေး – SMS ဖြင့် အကြောင်းကြားခြင်းကို လုပ်ဆောင်လိုက်ပြီးနောက်၊ ကျွနု်ပ်၏ အရေးပေါ် အဆက်အသွယ်အနေနဲ့ ကျိန်းသေ လက်ခံရရှိခြင်း ရှိသည်ကို မည်ကဲ့သို့ သိနိုင်ပါမလဲ?
အဖြေ – လုပ်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုတာနှင့် SMS အကြောင်းကြားစာ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို အမှန်ခြစ်ဖြင့် ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် SMS အကြောင်းကြားစာကို လက်ခံရရှိသူမှ ဖတ်ပြီးကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း မဟုတ်ပါ။